Imeyili yemizuzu eyi-10 - 10 Minute Mail
Ikheli lakho le-imeyili liphelelwa yisikhathi ngo- 00:00 .
Qala kabushaGcwalisa futhiKushaPhinda
Ngidinga imizuzu engu-100 isikhathi eside!
Sekela imeyili lemizuzu le-10
I-imeyili yakho yesikhashana izenzakalisile.
Thola elinye ikheli le-imeyili.Buyisela ikheli elisusiwe %s.
I-imeyili yethu yesikhashana isuswe ngokuphelele futhi ayikwazi ukutholakala.
Thola elinye ikheli le-imeyili.
Buyisela ikheli elisusiwe %s.
I-10minutemail.net iyisevisi yama-imeyili yamahhala, eyodwa, lapho amakheli e-imeyili aphela khona ngemuva kwemizuzu eyishumi. Ungangeza umnqamulajuqu ngemizuzu eyishumi nganoma yisiphi isikhathi. Ngemuva kwemizuzu eyi-10, ngeke usakwazi ukufinyelela i-imeyili oyidalile. Anazi ukuthi iwebhusayithi oyibhalisile ithengise ikheli lakho le-imeyili? Ikheli le-imeyili eliyimizuzu eyi-10 yisisombululo sale nkinga.
Q1: Ngikwazi ukwenza ngokwezifiso amabhokisi eposi?
I-A1: CHA, iwebhusayithi yethu iyinsiza yemeyili e-REAL elahlekile, asikwazi ukuvumela abasebenzisi ukwenza ngokwezifiso noma yiliphi igama lamabhokisi eposi. Lokhu ukuvikela ubumfihlo babo bonke abasebenzisi, ngiyabonga ngokuqonda kwakho.
Q2: Ngabe ibhokisi lami leposi lingakhiwa kabusha?
I-A2: CHA, siqopha i-bitmap hash yegama lebhokisi leposi elenziwe. Ngemuva kokuthi ibhokisi leposi selisusiwe, leli rekhodi lizovimbela igama elifanayo lebhokisi leposi ukuthi liphinde likhiqizwe.
Q3: Imizuzu eyi-10 nje?
I-A3: CHA, unganweba isikhathi ngaphambi kokuphelelwa yisikhathi, futhi ngaso sonke isikhathi wandise isikhathi sokwenza ibhokisi leposi lingaphelelwa yisikhathi.
Sicela usebenzise i-Facebook noma i-imeyili: admin@10minutemail.net ukuxhumana nathi (ngesiNgisi noma ngesiShayina). Sicela wazi ukuthi kungenzeka singaphenduli ngaso sonke isikhathi, kodwa zama ukwenza okusemandleni ethu.
Mayelana nalolu limi
Awunayo imvume yokufinyelela le imeyili.